Ma jirto meel murugo ama cabsi maskaxda ku haysa qofkii miyir-beelka ka raadsanaya oo dhan.
MAGAALADA AH waa maadooyinka dhammaan maadooyinka loo baahan yahay in la baro, oo ay lagama maarmaan tahay in la baro, haddii nin uu sameynayo horumar dhab ah. Sidaa darteed miyirku hadda waa mawduuca aan tixgelineyno.
Miyirku waa asalka, ujeedka, iyo dhammaadka nidaam kasta oo weyn ee falsafada, sayniska, ama diinta. Wax kastaaba waxay leeyihiin miyir-qabka, dhammaadka dhammaantiisuna waa miyir-beel.
Su'aasha miyirigu marwalba waxay noqon doontaa quusashada maaddada. Qaarkood waxay isku dayeen in ay ka qaadaan mawduuca iyaga oo sheegaya in miyirku yahay natiijada ficilka xoogga iyo arrinta. Qaar kale waxay qabteen in miyirku uu ka dhigo awood iyo arrin labadaba, oo weliba sheegan in inkastoo ay lagama maarmaan tahay labadaba, haddana waa mid ka madaxbannaan midkood. Qaar kale waxay yiraahdeen ma ahan mid mawduuc ah oo ku saabsan qofkasto ku fakaraya wax faa'iido leh.
Dhammaan maadooyinka, miyirku waa kan ugu sarreeya oo muhiim ah. Daraasaddeedu waxay soo saartaa natiijooyinka ugu waxtarka badan. Iyadoo loo marayo fikradaheena ugu sarreeya ayaa la gaari doonaa. Dhamaanba wax walba waa suurtagal. Miyirku kaligiis wuxuu ku xiran yahay jiritaanka nolosheena iyo joogitaanka. Haddaanay jirin wax war ah oo ka mid ah adduunka oo aanu ku noolaanayno, mana noqon karno inaan ogaanno cidda iyo waxa aan nahay.
Waxa aan u baahannahay in aan nafteena ku khusayno waqtigan maahan mowqifka laftiisa laftiisa, laakiin taas oo ah mawduuca miyirku taagan yahay. Miyir-qabku maaha wax macquul ah. Taas oo ah miyir-qabka oo kaliya waa maaddaama miyir-qabka, taas oo ah muujin.
Miyir-qabku waa xaqiiqada dhabta ah ee wax kastoo ay ku xiran yihiin, laakiin sidoo kale waxaan inta badan ku dhignaa muhiima yareyno marka loo eego qaar ka mid ah foorar iftiinka ama dhacdooyinka gudbinta. Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay inay si joogta ah nala joogaan annaga oo nala yareyno oo aan u daaweyno sida labaad ama ku-tiirsanaan. Halkii laga bixin lahaa ixtiraamka, cibaadada, cibaadada waxaa sabab u ah It, iyo Kaligii; Waxaan jaahil ahayn inaan allabario ilaahyo is beddelaya oo weligood ah.
Qarsoodiga qarsoon ee "Unknown Unknown", ayaa calaamad noo ah aan caqligal ahayn oo aan isku dayeyno inaan ku muujinno mowqifka erayga. In kastoo macnaha ereygani waxaa laga yaabaa in lagu xiro maanka ugu fudud, weli cidna ma noolayn si kastaba ha ahaatee, taas oo xalineysa qarsoodiga kama dambaysta ah ee miyirka. Dhinaca kale, maaddaama uu sii socdo baadhitaanka, mawduucuna wuxuu noqonayaa mid ballaadhan oo qotodheer oo qotodheer leh oo aan dhamaad laheyn, ilaa raadiyaha, oo ka sarreeya jirkiisa, wuxuu u taagan yahay feejignaan: muddo gaaban, ka baxsan wakhtiga wakhtiga, ee aan la garanaynin, ee sharafta iyo aamusnaanta, oo u muuqday cibaadooyin ficil ah miyir la'aan. Isku bedelida aan la qaybin karin, oo aan la garan karin, oo aan la caddayn Karin, wuxuu weli taagan yahay gudaha xudduudaha wakhtiga, illaa dareen cabsi leh, rabitaan uu ku ogaanayo, inuu fahmo, inuu galo fikrado ka baxsan fikradaha kala duwan, wixii aan la hadli karin, waxay maskaxda ku haysaa maskax ahaan iyo aragtida ay ku guuldareysato. Ku soo noqoshada dawlad, taas oo fikradda ay ku xidhantahay xuduudaha, wuxuu markale isku arkaa xilliga xaadirka ah, xusuusashada taariikhda iyo mustaqbalka. Laakiin haddana mar dambe ma noqon karo jaahil ah: wuxuu caabudaa miyir-qabka sida lagu muujiyey tiro aan xadidnayn oo qaabab iyo dawlado.
Miyirku waa hal mar ugu muuqda, sida ugu fudud, runta ugu weyn iyo tan ugu caansan. Cirku wuxuu miyir beelay. Miyir la'aantu maaha arrin, meel, ama walax; laakiin miyirku waa walxaha oo dhan, waa meel kasta oo meel bannaan ah, oo ah gudaha iyo hareeraha atomiga kasta. Miyir-la'aantu marnaba isbeddelo. Had iyo jeer waa isku mid. Miyirku wuxuu isku mid yahay keruubka jilicsan, geed canab ah, xayawaan weyn, nin sharaf leh, ama ilaah. Waa arrin si joogto ah u badala sifooyinka, sifooyinka, iyo heerarka horumarka. Miyir-qabka ayaa ka muuqda oo lagu muujiyay arrin muuqaal ah oo nooc kasta ah si uu u noqdo mid kala duwan, halka farqiga u dhexeeyo tayada kaliya, ma aha miyir.
Dhamaan gobollada iyo xaaladahaba, miyirku had iyo jeer waa mid. Marnaba isbeddel maaha, ama xaalad kastaa waa wax kale oo miyir la'aan ah. Dhammaan arrimahaan, waa kuwo miyir-qabka ah oo lagu qiimeeyo toddoba dawladood ama heerar kuwaas oo badanaa loo yaqaan 'miyir-qabka', laakiin xaqiiqda dhabta ah waxay ku qoran tahay arrin, mana aha miyir.
Laga soo bilaabo ugu hooseeyaa gobolka ugu sarreeya, ujeedada dhismaha iyo isbeddelka arimaha waa in la dhiso qaabab iyo meyd ah iyo in ay hagaajiyaan sida baabuurta loogu talagalay muujinta miyirka. Xaaladaha xaaladuhu waa fasalo kala duwan ama heerarka horumarinta arimaha. Dawladahaasi waxay ka kooban yihiin caalamka oo dhan, laga soo bilaabo arrinka ugu hooseeya ee su'aasha ah ee la xayiray arrintaas oo ah godka ugu sarreeya.
Ujeedada horumarintu waa isbedelka arrinta ilaa ay ugu dambeyntii noqoto miyir. Laga soo bilaabo markii ugu horeysay ee aan la dabooli Karin, arrimuhu waxay kobciyaan horumarkooda xagga miyirka, iyada oo loo marayo qaab, kobcin, dareen, aqoon, niyad xumo, ilaahnimadiisa.
Xaaladda ugu horreysa ee arrintu waa mid hoose ama mid atomi ah. Mawduucan xaaladdan waa mid aan muuqan oo miyirkiisu yahay heerka ugu fudud.
Xaaladda labaad ee arrinta waa macdan ama molecular. In gobolka koowaad ee atomiga ah, iyo by horumarka hore, barbaro kale oo ka yar oo horumarsan oo ku saabsan. Iyada oo kuwani waxay isku daraan, kareemayaasha, kristaan, geli qaabka adag ee macdanta, sidaas darteed waxay noqotaa mid miyir qabo dawlad ka duwan midka atomiga. Iyadoo atomi ay ahayd mid miyirkiisu uu yahay dawlad keliya, taas oo aan awood u lahayn in ay muujiyaan miyir la'aanta, marka laga reebo gobolka aan xiriir la lahayn. Isla marka uu atomigu isku daro jajabyo kale, waxay kordhisaa horumarkeeda xagga miyir-qabka, waxay hoggaamisaa jibbaarada taas oo ah xarunta, waxayna ka gudubtaa awoodda fedraalka ah ee aan awood u lahayn in ay noqoto maaddada molecular ee macdanta, halkaas oo ay ku horumarinayso qaab . Xaaladda macdanta ama maaddada molecular ee arrintu waxay leedahay ilmo adag oo leh arrin hoose waxayna muujineysaa saameyn xoog leh oo ka dhan ah ciidamada hoose. Awoodgani waxaa lagu soo bandhigay mishiinka.
Xaaladda saddexaad ee arrinta waa khudradda ama xayawaanka. Aamuska oo u hoggaansamey jajabyo kale, waxa uu soo jiidanayaa meco-dhaqameedyo yar yar, oo wuxuu ka kooban yahay xaalada maaddadeed, oo ka dhigaya boqortooyo macdanta ah, xaalad maskaxeed oo maskaxeed oo kala duwan, oo loo kala soocayo boqortooyada qudaarta, oo noqonaya unug. Arrinta unugyadu waxay miyir beeshaa heer ka duwan tan maadada molecular. Halka shaqada ee molecule ay ahayd qaab muuqaal ah, shaqada unuggu waa koritaanka jidhka. Halkan waxaa ku xusan arrimo nololeed.
Xaaladda afaraad ee arrintu waa xayawaan ama dabiici ah. Aamuska oo u hoggaansamey jajabyo kale oo ku jira dawlad mecobiibo ah, iyo meeshii laga soo galo gobolka gacanta oo dhan oo dhan boqortooyo qudaarta oo dhan, waxay u dhexaysaa unugta jidhka xayawaanka, oo ay saameyn ku yeelato miyir-qabka sida lagu muujiyay xayawaanka, hawlaha xubnaha xayawaanka, ka dibna xakameynaya xubinta, uguna dambeyntana waxay u keentaa xaalad xoolo oo dabiiciga ah ee xayawaanka nool, taas oo ah rabitaan. Kadibna waxay qaadaysaa masuuliyad iyo horumar, oo ka soo jeeda noolaha xoolaha ee fudud si ay u noqdaan xayawaanka ugu caansan uguna horumarsan.
Xaaladda shanaad ee arrintu waa maskaxda bini'aadamka ama I-I-I. Marka la eego da'da tirooyinka aan la tirin karin, atomiga aan la dabooli karin oo horseeday jajabyo kale oo macdanta ah, iyada oo loo marayo khudradda, iyo xayawaankaba, ugu dambeyntii waxay gaadhsiisaa xaalad sare oo ka mid ah arrinta taas oo ka muuqata miyir-qabka. Ahaanshaha shakhsi shakhsi ah oo leh muraayadda miyir-qabka dhexdeeda, waxay u fakareysaa oo ka hadlaysaa lafteeda sida aan ahay, maxaa yeelay waxaan calaamad u yahay Midda. Bini'aadamku wuxuu ku hoos jiraa hoggaankiisa xayawaan jidheed. Xayawaanku wuxuu kicinayaa mid kasta oo ka mid ah xubnihiisa si ay u qabtaan hawl gaar ah. Cid kasta oo ka mid ah xubnuhu waxay ku hageysaa mid kasta oo unugeeda ah si uu u sameeyo shaqo gaar ah. Nolosha cell kasta waxay hoggaamisaa mid kasta oo ka mid ah molecules si kor loogu qaado. Naqshadeynta mid kasta oo ka mid ah maaddooyinka ayaa xambaarsan mid kasta oo ka mid ah asalkiisa si habsami ah, miyir-beelkuna wuxuu ku riyaaqaa mid kasta atomka isagoo ujeedada u noqonaya is-miyir. Atomada, molecules, unugyada, xubnaha, iyo xayawaanka, dhammaantood waa kuwa maanka ku haya - xaalad is-miyir leh oo u taagan arrin-u shaqeynaya taas. Hase yeeshee, maskaxdu ma gaadhsiiso is-miyir, taas oo ah horumar dhamaystiran, ilaa ay ka adkaatay oo ay xukuntay dhammaan rabitaankii iyo riyadii lagu helay dareemada, oo maskaxda ku haysay dhammaan fekerka miyir-qabka sida laftiisa ka muuqato. Kadibna kaliya waa mid miyir beelay; iyo su'aashiisa: yaan ahay? Waxay aqoon u leedahay, jawaabta: Anigu waxaan ahay.
Xaaladda lixaad ee arrintani waa nafsadda aadanaha ama I-aad-iyo-aad-tahay-waxaan ahay. Maskaxda oo ka soo horjeeda dhammaan xayawaanka ku jira xaaladeeda oo ay kasbatay is-aqoon, waxaa laga yaabaa inay ku sii jiri karto xaaladdan; laakiin haddii ay doonayso inay miyir beesho, waxay noqonaysaa mid miyir-beel ah sida uu ka muuqanayo dhammaan maskaxda qofnimada. Waxay gasho xaaladda gobolka ee ku jirta maskaxda dadka oo dhan.
Xaaladdan oo kale I-aad-Ad-iyo-Aad-I-I-Dhibaato dhan bani-aadmiga oo dareemaya inuu yahay aadanaha.
Xaaladda toddobaad ee arrintu waa ilaahnimadiisa ama rabbaani ah. Nafta aadanaha ama aniga-iyo-adigu-waxaan ahay, oo iska bixinaya wanaagga oo dhan, waxay noqoneysaa ilaahnimo. Rabigu wuxuu ku midoobayaa hal, bini-aadan oo kale, ragga, xayawaanka, dhirta, macdanta, iyo walxaha.
Waxaan nahay dad aad u miyir-beel ah oo macnahoodu yahay in miyir-qabnimadu ay ka muuqato maskaxdeena. Laakiin maskaxdeenu waxay sidoo kale ka tarjumayaan xaalado kala duwan oo ah arrin taas oo muujinaysa dareeno aan la tirin karin, damqasho, iyo rabitaan. Isaga oo caqli-gal ah, uur-ku-noolaansho, miyir-beel aan isbeddelaynin, mid kastaa wuxuu isu aqoonsadaa jirka intiisa kale miyir beel. Tani waa sababta keentay dhamaan murugo iyo murugo. Maqnaanshaha miyir-qabka maskaxda ayaa ogyahay kuwa daa'imka ah iyo kuwa dheerba in ay midoobaan, laakiin maskaxdu maaha mid takooris ah u dhexeeya runta iyo been-abuurka, iyo dadaalkeeda ah inay ku takoorto waxa ay dhibeysaa. Iyadoo dadaal joogto ah oo midkeennu midkeennu gaadhi doono ugu dambeyntii goloyaasha silica oo iskutallaabta lagu qodbo arrimaha u dhaxeeya qulqulka qulqulaya iyo quruxda adduunka. Laga soo bilaabo iskutallaabta noocan oo kale ah, wuxuu soo kicin doonaa qaab cusub, oo miyir-beelka laga soo qaaday maskaxda istiraatiijiga ah, oo ah I-a-You-and-Thou-art-nafta nafsadda guud. Sidaa soo sara kiciyey wuxuu yahay dhiirigeliyaha in uu dib u cusbooneysiiyo dadaalka si uu u caawiyo dadka kale, iyo hage kasta oo bini'aadam ah oo rumaysadkooda ku sifooba.